ဗေဒင်ထဲမှာလိင်ဖော်ပြမှု! အကြားအမြင်ရဗေဒင်ဆရာ Candace ထံမှလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ! - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > ဗေဒင်ထဲမှာလိင်ဖော်ပြမှု! အကြားအမြင်ရဗေဒင်ဆရာ Candace ထံမှလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ!
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, aries, Astrolada, ဗေဒင်အတတ်ပညာ, ကင်ဆာ, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, ကျွန်မဖတ်ပါ, အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, aries ချီတက် 27th 2017 အတွက်လဆန်း, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, pis ..., အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်ဟောကိန်းများ, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အကြားအမြင်, Sagittarius, လိင်နက္ခတ်ဗေဒင်, ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, tarot, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ, အမွှာလျှံဖတ်20 မှတ်ချက် ဗေဒင်ထဲမှာလိင်ဖော်ပြမှုအပေါ်! အကြားအမြင်ရဗေဒင်ဆရာ Candace ထံမှလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်သိကောင်းစရာများ!
Candace ရဲ့လိင်နှင့်ချစ်ခြင်းနက္ခတ်ဗေဒင် webinar အဘို့အဘယ်မှာသင် $ 10.00 အစောပိုင်းမှတ်ပုံတင်ရေးအပေါ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကယ်တင်!
Braylin ဝဲလ် says:
မတ်လ 23, 2017 မှာ 7: 52 နံနက်
ကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျ၏အမွှာလျှံနှစ်ဦးစလုံးဟာ 8th အိမ်တော်၌ Virgo ရှိသည်။ ? (နှင့်သူမရီစရာတစ်ခု Virgo င်)?
Candace ဒီကိုဆင်းချိုးဖျက်ဖို့ကူညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါ 8th အိမ်တော်၌ငါ၏အနေ, လ, ဗီးနပ်စ်နှင့် Saturn ရှိသည်! ? နဲ့ boot မှ virgo ၌တည်၏။ ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ကိုချစ်နဲ့ကျွန်မလည်းလိင်ကိုချစ်။ လူတို့သည်မိမိတို့ဘဝပုံပြင်များအကြောင်းကိုငါ့အားနက်ရှိုင်းသောလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အတွေးများကိုခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားသောအခါငါသည်လည်းကိုချစ်။ သူတို့သည်ငါ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချကြောင်းနှလုံးကယူပါ။ ငါဆက်ဆက်အချို့ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပွီ! ငါ၏အသစ်ကိုယခုနှစ်ရဲ့ resolution ကငါ့ကိုကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်မှာတုန်ခါခြင်းနှင့်ကြောင်းထိတွေ့အသုံးပြုပုံငါအကောင်းဆုံးရိုမန်းတစ်ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖွင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအိပ်ခန်းငါနှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့သူတစ်ဦးမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ် (သင်တန်း!) လေးစားမှုနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းဝိညာဉ်အားဖြင့်, ငါ့နှင့်အတူ ငါ၏အနညျးငယျလီယိုဘုရင်ကသူသည်သား,! ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မဒီ 8th အိမ်တော်၌ဂြိုလ်နှင့်အတူရုန်းကန်အခြားလူများကူညီပေးသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ , Transform အသွင်ပြောင်းအသွင်ပြောင်း!
အဆိုပါ webinar တိုက်ရိုက်အများပြည်သူဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကပုဂ္ဂလိကပါသလဲ ထိုသို့သာစုံတွဲများအဘို့ဖြစ်၏?
Miska T က says:
ဤနေရာတွင် 8th အတွက် Taurus 🙂
က venus retrograde စဉ်အတွင်းအသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးနှင့်အတူရက်စွဲများအပေါ်သွားကြဖို့အဆင်ပြေပါသလဲ
Ashok သည် RS မဟာ kann says:
ငါ scorpio ့
scorpio အတွက် 8th အိမ်သူအိမ်သား yeees ။ စူပါ freakyyy ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအကြှနျုပျနှငျ့အကိုသူ့အဘို့😉
oznur aygen says:
ငါဒီနားထောငျခဲ့ပွီးနောကျ .. ရုံအေ့ဟေယခုအချိန်တွင်ခဲ့ငါ ... အိမ်သူအိမ်သားကြိမ်မြောက်အဆိုပါ 8 အတွက် Libra အတွက် scorpio နှင့် pluto အတွက်ဂျူပီတာရှိသည်။
8th အိမ်တော်၌ Libra နေ, Taurus ။ ငါ့ကိုဒီတော့ငါအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုချစ်, ငါအရမ်းရယ်ရတယ်, ပြင်ပလိင်ကိုချစ်။
T က McFarland says:
ပလူတိုဆန့်ကျင်ဘက်ပု 8th အိမ်တော်၌ဒီမှာ 5th အိမ်တော်၌ကင်ဆာ, ဒါပေမယ့်အင်္ဂါဂြိုဟ်။ ကုံအတွက် venus ။
ပုပ္ပနိမိတ်နှင့်ဂြိုလ်ကသောတိုတိုဗားရှင်းမှာတော့? ငါဟူသောအသုံးအနှုနျးအများအားဖြင့် 5th အိမ်သူအိမ်သား Leo ခဲ့သည်ထင်။
ငါသည်ငါ့ရှစ်အိမ်တော်၌ Scorpio ရှိသည်! Hubba! Hubba! ?
skorpia ဂရမ် says:
ငါ 8th အတွက် pisces အတွက် venus နှင့်ဂျူပီတာရှိသည်။ လိင်မှမထင်မှတ် / စိတ်ကူးယဉ်လက်ျာဘက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါမြင့်မားသောလိင် drive ကိုရှိသည်နှင့်ပျင်းရ။ အဘယ်သူမျှမငါ alot န်းကျင်ဝက်အူကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလည်း karmic attachment ကိုဖွင့်တစ်စုံတစ်ဦးမှဆွဲဆောင်တယ်ဆိုရင်။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူတို့ကိုမြင်နှင့်နှင်းဆီရောင်စုံမျက်မှန်ကိုချွတ်ယူရန်အလွန်သတိထားပါရန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသွားရခွင့်အလွန်နာကျင်ပါတယ်။ ငါကတက် fuck ဆိုတဲ့အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ခုတည်းရောက်ခဲ့ဖူးဖို့မတတ်နိုင်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အများဆုံးယောက်ျားတွေထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးများအတွက်အနေအထား၌နေကြသည်မဟုတ်, သူတို့တစ်တွေစိုကျပစျလိုကြသည်။ ဒါကြောင့်ငါနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး, သူတို့ပူဖြစ်ကြပြီးနှောင့်အယှက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကငါ့fault✋စိတ်မကောင်း Boo, အရူးရ ??
fera ကျောက်စိမ်း says:
ဒါနဲ့4ဒီဂရီ Aries (7H) မှာငါ့အ Natal အင်္ဂါဂြိုဟ်ရှိသည်။ ဗီးနပ်စ်ဟာယာ conjuncts ဘယ်မှာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် ငါဒီအပေါ်အချို့သောအချက်အလက်ရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းအလိုရှိ၏။
နာတာလီက G says:
အဆိုပါ 8th house✋အတွက် Scorpio
ရန်လိင်မှကြွလာသည့်အခါ 8th အိမ်တော်၌ကုံရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကို detach လုပ်လိုက်သောနိုင်ထင် -i ။ အဆိုပါ 8th အိမ်တော်၌တစ်ဦးကုံ 8th နယ်ခြားမုခ်နှင့် Saturn နှင့်အတူတစ်ယောက်ယောက်ကိုလိင်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စား asexual, ဒါမှမဟုတ်မပါလျှင်ကျွန်မအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
-i ကိုလည်းနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယားထဲမှာကုံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအလွန်ပူးတွဲမနေဧရိယာကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါ့နှမကုံ IC ရှိပြီးသူမမှာအားလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မသူမအေးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူမအတော်လေးဆင်ခြင်တုံတရားပါပဲ။
သငျသညျ -Can သင်ဤစဉ်းစားသောအရာကိုအကြှနျုပျကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီး?
ငါ "အုမဲ့ငါ 8th အိမ်သူအိမ်သားအပေါ်မဆိုဂြိုလ်ရှိ dont" ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည်ပြီးတော့ Candace "သင်မထင်မှတ်နေ 8th အပေါ်ကုံ" ဟုပြောစဝင်
Svetoslava Trifonova says:
ငါ 8th အိမ်များတွင် stellium ရှိ🙂
ဖွစျတဲ့တာ Stojkovic says:
, pluto, mars နှင့် Saturn 8th အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကို retrogrades ရှိသည်။ (Libra အတွက် 8th အိမ်သူအိမ်သား) 🙂
Laur ရှငျဘုရငျ says:
မင်္ဂလာပါ, ငါ့ 8th အိမ်သူအိမ်သားကုံကအုပ်ချုပ်ချည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုငါစကားကိုနားထောငျသငျ့သညျ? ကြေးဇူးတငျစကား